Dumarka reer Morocco oo ka dagaalamaya xadgudubka maalin walba - BBC News Somali
Dumarka reer Morocco oo ka dagaalamaya xadgudubka maalin walba
Ma sahlana in dumarka Morocco ay jidka maraan iyadoon la aflagaadayn. Morgan Meaker ayaa dhagaystay dadka doonaya inay joojiyaan cudurkan xadgudubka.
"Morocco, wax walba oo aad samaysid, waxaad tahay sharmuuto," ayay sheegtay Ghizlane, oo ka shaqaysa hoteel. "hadaad xiratid waxa lagu quruxsado faruuryaha, waxaad tahay sharmuuto, hadaad madaxa aad dabooshid, waxaad tahay sharmuuto."
Carada ayaa banaanka u soo baxday Ghizlanes oo soddon jir ah, iyadoo fadhida maqaayad bartamaha Marrakesh. Sida dumarka kale ee reer Morocco Ghizlane ayaa aragta xadgudub maalin walba. Laakiin sanado yar ka hor waxay bilawday inay la dagaalanto.
Sirteeda waa inay samayso wax adkaynaya in nimanka ay aflagaadeeyaan dumarka jidka maraya, hadal ahaan ama ficil ahaan. Waxay la murantaa nimanka ku yiraahda jidka "waxaad qabtaa lugo fiican", ama mid kale oo ay ku eedaysay tuugnimo kadib markii hadal xadgudub ah uu ku yiri bangiga dhexdiisa . "Dad badan waa inay diidaan dhaqankan" ayay dhahday. "Nimanka wadankayga ma yaqaanaan marka wax la joojiyo."
Iyadoo haysata waxbarashada shahaadada Master degree, Ghizlane, ayaa sheegtay inaysan ahayn kaligeed dadka ka hortagaya xadgudubka.
Lahaanshaha sawirka Frances Bakewell
Image caption Ghizlaine Abhlain: "Morocco, wax walba oo aad samaysid waxaad tahay sharmuuto"
Rabat, magaalo madaxda Morocco, waxaan kula kulmay Mo. Hadalkeena ayaa ah mid adag. Waxay sheegtay inaysan badanaa ka hadlin xuquuqda dumarka - saaxiibadeed ayaan aad u danayneen.
"Riyadaydu waxay tahay in dumarka reer Morocco ay bartaan sida loo joojiyo xadgudubka," ayay dhahday. " Markii qof ku xadgudbo, waxaan ku riyoodaa dumarka inay wajiga ninka jabiyaan."
Waxay isku dayday inay samayso inay barato isboortiga lagu barto sida la isku difaaco laakiin waa inay fasax ka qaadataa dowladda. Codsigeeda looma soo jawaabin. Sidaas darteed kaligeed ayaa ka hortagaysa aflagaadada midba mar. "Markii qof isku dayo inuu i taabto" ayay dhahday "Waan ku qayliyaa ninka. Waxaan dhahaa, maxaad u samaynee waxan? Nimankan ma fahansana. Waligay ma helin jawaab fiican."
Laakiin sharci qabyo ah oo ku saabsan xadgudubka dumarka oo horyaala baarlamaanka Morocco, dadka jidka dumarka ku aflagaadeeya ayaa la kulmi doona inta u dhaxaysa bil ilaa lix bilood oo xarig ah ama ganaax $ 250 ilaa $1,200.
"Waxaan u malaynaynaa sharcigan inuu yahay mid aan fiicnayn" ayay sheegtay Stephanie Willman Bordat, oo Maraykan ah oo ka shaqaynaysay xuquuqda dumarka 21 sano.
"Waa isbadal yar oo lagu samaynayo sharciga danbiyada" ayay sheegtay. Dhibka dhan waa dumarka oo sheegin dhibka loo gaysto, boliiska ma baaraan, dacwo oogayaashana ma dacweeyaan."
Laakiin xadgudubka jidka kuma reebaan dumarka inay aamusaan oo kaliya. Waxay sidoo kale xadidaa xoriyadooda ay ku aadi lahaayeen waxbarasho, shaqo, iyo sidii ay u dareemi lahaayeen ammaan waddankooda.
Halka isbadal inuu dhaco ay qaadan karto sanado, waqtiga dhow in isbadal lagu sameeyo sharciga ayaa diraysa fariin cad - waxa la ogolaan karo iyo waxa aan la ogolaan karin.
Image caption A 2015 banaanbax Morocco ka dhacay oo looga soo horjeedo xadgudubka dumarka kadib markii la xiray laba dumar oo watay dhar aad u gaaban
Dumar walba Morocco ma laha awood ay ku dagaalamaan. Dad badan ayaa iska indho tira, si ay uga hortagaan dagaal.
Iyadoo socota xaafada qadiimiga ee Rabat, Gitana oo ganacsato ah ayaa sheegtay si ay iskaga ilaaliso aflagaadada nimanka iyo taabashadooda inay meel walba ku tagto gaarigeeda.